कसरी एक Android ट्याब्लेट ढाँचा: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | Android, ट्यूटोरियलहरू
वर्तमान मा, बजारमा प्राय: ट्याब्लेटले एन्ड्रोइड प्रयोग गर्दछ एक अपरेटिंग प्रणाली को रूप मा। त्यसोभए बजारमा मोडेलहरूको छनोट फराकिलो हुन्छ। तसर्थ, तपाईंसँग सधैं हुनुपर्दछ खातामा केहि पक्षहरू जब नयाँ ट्याब्लेट किन्नुहुन्छ। केही समय पछि, त्यहाँ ट्याब्लेटको साथ समस्या हुन सक्छ।
यस्तो हुन सक्छ कि केहि मालवेयर यसमा स्लिप भएको छ वा यसको अपरेशनमा समस्याहरू छन्। वा कि मालिकले यसलाई बेच्ने सोच्दै छ। यस्तो अवस्थामा, एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा एक धेरै बारम्बार समाधान यसको स्वरूपणमा शर्त लगाउनु हो.
1 एक Android ट्याब्लेट ढाँचा के हो?
2 एन्ड्रोइड ट्याब्लेट फर्म्याट गर्नुहोस्
2.1 सेटिंग्सबाट ढाँचा
2.2 रिकभरी मेनूबाट ट्याब्लेट फर्म्याट गर्नुहोस्
एक Android ट्याब्लेट ढाँचा के हो?
एन्ड्रोइड उपकरणहरूको मामलामा, जस्तै ट्याब्लेट, हामी ढाँचा वा कारखाना पुनर्स्थापना को बारे मा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाको मतलब भनेको ट्याब्लेटमा सबै डाटा मेटिनेछ। त्यसमा सबै फाइलहरू जुन यसमा छन् (फोटोहरू, भिडियोहरू, संगीत, कागजातहरू, आदि) अनुप्रयोगहरूका साथै डाउनलोड गरिएका छन्, पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। ट्याब्लेटमा यी फाईलहरूको कुनै ट्रेस हुनेछैन।
यो एक धेरै आक्रामक प्रक्रिया हो, तर यो गर्दछ एन्ड्रोइड ट्याब्लेट आफ्नो मूल राज्यमा फर्कन्छ। ढाँचा मिलाउँदा, यो राज्यमा फर्किन्छ जुनसँग यसले कारखाना छोड्दछ। यसैले यसलाई कारखाना रिस्टोरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै विशिष्ट समयमा गरिन्छ, किनकि यसको मतलब प्रश्नमा ट्याब्लेटमा भएका सबै डाटा हराउने काम गर्दछ।
यसको लागि, यदि मालिकले ट्याब्लेट बेच्ने सोच्दै छ भने, वा अरू कसैलाई दिने, एक राम्रो तरिका हो तपाईंको व्यक्तिको डाटामा पहुँच गर्नबाट रोक्नको लागि। साथै यदि भाइरस भित्र छिर्दा, एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा के हुन सक्छ, ढाँचा यो हटाउन को लागी एक तरीका हो, यदि कुनै अन्य विकल्प कि सन्दर्भ मा काम गर्दैन। त्यसैले केहि अवस्थाहरूमा यो केहि गर्न सकिन्छ। यो ट्याब्लेटमा प्राप्त गर्न, त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन्। फारम जुन हामी तपाईंलाई तल भन्छौं।
एन्ड्रोइड ट्याब्लेट फर्म्याट गर्नुहोस्
सामान्य कुरा यो हो कि एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा यस ढाँचामा पूरा गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्। दुबै केसहरूमा यो यस्तो कुरा हो जुन हामी ट्याब्लेटबाटै प्राप्त गर्न सक्छौं। यसको ढाँचा गर्नको लागि तपाईंलाई कुनै पनि थप उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन। यद्यपि त्यहाँ मोडेलहरू हुन सक्छन् जसले हामीलाई यी दुई विकल्पहरू मध्ये कुनैलाई अनुमति दिँदैन। यो तपाइँले प्रयोग गर्नुहुने अपरेटिंग सिस्टमको संस्करणको अतिरिक्त प्रत्येक मेक वा मोडेलमा निर्भर हुन सक्छ।
एन्ड्रोइडमा ट्याब्लेट ढाँचा गर्ने पहिलो तरिका तपाईंको आफ्नै सेटिंग्सबाट हो। तिनीहरू भित्र यो प्रक्रिया सुरू गर्न सम्भव छ जहाँ एक सेक्सन छ। तसर्थ, हामीले पहिले यसको सेटिंग्स खोल्नु पर्छ। एक पटक तिनीहरू भित्र, यो प्रकार्यको विशिष्ट स्थान एक मोडेलबाट अर्कोमा परिवर्तन हुन सक्छ।
केही ट्याब्लेटहरूमा हामीले सुरक्षा सेक्सन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। जबकि अन्यमा यो उन्नत विकल्प खण्ड हो जुन हामीले प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। जे भए पनि तपाईको स्थानको पर्वा बिना, हामीलाई रुचि भएको सेक्सनलाई ब्याकअप / रिस्टोर भनिन्छ। त्यसकारण हामी यसको लागि हाम्रो Android ट्याब्लेटको सेटि within्हरू बीचमा खोजी गर्न सक्दछौं जुन ट्याब्लेटमा यसलाई पहुँच गर्न छिटो हुन्छ। यस खण्डमा एकचोटि, प्रक्रिया सुरू हुन सक्छ।
प्रयोगकर्ताहरूलाई सोधेको पहिलो कुरा हो यदि तपाईं जगेडा गर्न चाहानुहुन्छ भने। ढाँचामा गर्दा हामी ट्याब्लेटबाट सबै डाटा मेटाउन जाँदैछौं, डाटा हराउन नचाहेको डाटाको प्रतिलिपि गर्नु राम्रो हुन्छ। एन्ड्रोइड को मामला मा, हामी सजीलै गुगल ड्राइव मा एक जगेडा सुरक्षित गर्न सक्छौं। जब तपाईले प्रतिलिपि भन्नु भएको छ, तब यो सम्भव छ कारखाना डाटा पुनर्स्थापना सेक्सनमा।
यस खण्डमा ट्याब्लेट ढाँचा गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। प्रयोगकर्तालाई सोधिनेछ यदि उनीहरू निश्चित छन् कि उनीहरू के गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईंसँग पहिले नै त्यस्तो जगेडा छ भने, तपाईं अब सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईले यसलाई स्वीकार्नु पर्छ। त्यसो भए, यो एन्ड्रोइड ट्याब्लेटको स्वरूपण सुरू हुन्छ। यसले केही मिनेट लिन सक्दछ, यो यसमा भण्डार गरिएको डाटाको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
रिकभरी मेनूबाट ट्याब्लेट फर्म्याट गर्नुहोस्
त्यहाँ एक दोस्रो, सँधै प्रभावी तरीका एक एन्ड्रोइड ट्याब्लेट ढाँचाबद्ध गर्न को लागी छ। यो तथाकथित रिकभरी मेनू प्रयोग गर्ने बारे हो। यसमा पहुँच एक मोडेलमा फरक हुन्छ, किनकि त्यहाँ दुई प्रणालीहरू छन्। पहिलो ट्याब्लेट बन्द गर्नु हो, र त्यसपछि पावर र भोल्यूम अप बटनहरू एकै समयमा थिच्नुहोस् केही सेकेन्डको लागि, स्क्रिनमा मेनु देखा पर्दैन। दोस्रो केसमा, प्रक्रिया उही हो, केवल त्यहाँ ट्याब्लेटहरू छन् जसमा तपाईले थिच्नु पर्छ भोल्युम अफ गर्नुहोस्।
त्यसकारण, भनिएको ट्याब्लेटको ब्रान्डमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ मेनुमा पहुँच छ। एक पटक प्रश्नको विधि प्रयोग गरिसकेपछि, मेनू विभिन्न विकल्पहरूको साथ प्रदर्शित हुन्छ। स्क्रिनमा एक विकल्प कारखाना रिसेट वा वाइप डाटा हो, दुबै नामहरू धेरै केसहरूमा देखा पर्न सक्छन्। यो विकल्प तपाईंले त्यस समयमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
भोल्युम अप र डाउन बटन प्रयोग गरेर तपाईंले यी विकल्पहरूको बिच सार्नु पर्छ। जब तपाईं डाटा मेटाउन विकल्पमा पुग्नुहुन्छ, तपाईंले गर्नु पर्छ निश्चित गर्न ट्याब्लेटको पावर बटन प्रयोग गर्नुहोस्। स्क्रिनले प्रयोगकर्तालाई सोध्ने सन्देश प्रदर्शित गर्दछ यदि तिनीहरू निश्चितरूपमा त्यसो गर्न चाहन्छन् भने। किनभने एन्ड्रोइड ट्याब्लेट ढाँचा को प्रक्रिया शुरू हुनेछ। पुष्टि गर्न, फेरि पावर बटन थिच्नुहोस्।
यस तरिकाले, एन्ड्रोइड ट्याब्लेटको ढाँचा सुरू हुन्छ। फेरि, प्रक्रिया ट्याब्लेटमा केही मिनेट लिन सक्दछ। पूरा भएपछि, सन्देश स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। फेरि सुरू गर्न, सामान्य कुरा तपाईले गर्नु पर्दछ विकल्प "अब रिबुट प्रणाली" छनौट गर्नुहोस्। यस तरिकाले, प्रणाली फेरि सुरू हुन्छ, तर ट्याब्लेटबाट पहिले नै मेटाइएको सबै डाटाको साथ। राज्यमा फर्कन्छ जहाँ यसले कारखाना छोड्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » Android » कसरी Android ट्याब्लेट ढाँचा गर्ने
ऊर्जा सिस्टेम फ्रेम स्पिकरहरू, वा कला र प्रविधि कसरी संयोजन गर्ने